Dakhliga Badan ee DHH iyo qorshe xumada inna haysatta ee aynu xasuusanno maalinta roob da’o oo keliya. | Salaan Media
Dakhliga Badan ee DHH iyo qorshe xumada inna haysatta ee aynu xasuusanno maalinta roob da’o oo keliya.
Dakhliga DHH, oo ka yimaadda saddex meelood.
1. Mashruuca JPLG (Un joint programme on Local governance) oo deeq bixiyayaashu inaga caawiyaan.
2. Cashuuraha, kirooyinka bakhaaradda suuqyada, liisannada iyo mulkiyadaha IWM (Own Revenue).
3. Lacagaha lagu kabo DHH, ee dawladda dhexe ku kabto ( Financial Suplement).
1. JPLG Mashruucan UN-tu innaga caawiso waxay uugu talo galeen, in lagu dhiso, lagu dayactiro ama lagu qalabeeyo Kaabayaasha bulshada (Social Infrastructures), hadday tahay waddooyin,cusbitaallo, iskuullo, saldhigyo bilays, xarumo dawladeed IWM. Ka dib markii la ogaaday in bulshadu cid welba uga ogaal badantahay baahiyaheeda, waxay deeq bixiyayaashu isla garteen maadaamoo Dawladaha Hoose yihiin, haayadaha dawladda ee ugu dhaw bulshada, adeegyada tooska ahna siiyaa yihiin dawladaha hoose, inay iyagu maamulaan oo qorsheeyaan, fuliyaanna mashaariicda loo qorsheeyo.
DHH waxay nasiib u heshaa saamiga ugu badan JPLG oo dawladaha hoose ee degmooyinka kale helin, wax muuqda oo la yidhaa waa lagu qabtayna bulshadu illaa hadda ma aragto.
2. Cashuuraha, Mulkiyadaha, Kirooyinka bakhaarada dawladda ee bacdalayaasha suuqyada Waaheen iyo Gobanimo, juwanada maalinlaha ah IWM. Oo sannadkii soo xareeya dakhli dhan
104 Billion SLSH oo u dhiganta 11.5 M$, iyana wey dhisi kari weyday waddooyin iyo biriij kale oo lagu beddelo kan la dhisey 1968, oo haddii sixmaddu ku badato danba isaga dumi doona.
3. Kabka dawladda dhexe (Financial Suplement),oo hadba ku xidhan, xaaladda taagan iyo dhibaatada markaa la xallin rabo, waxa iyaduna taas dheer saamiyada dadweynuhu bixiyo, marka waddooyin la dhisayo oo ah 40% oo ganacsattada laga qaado iyo dadweynaha.
Waxaasoo dhan ka dib suuto gal maaha,uumana qalanto Hargeysi in maalinta roob soo da’o oo keliya la xasuusto, uumana qalmo anigoo dakhligaa haysta in marka aan u tallaabayo daantaas xilliga roobabka aan biriij iga fog sixmad u galo ama sixmadaydu dumiso anigoo heli kari lahaa dad ii sameeya biriijyo labaad saddexaad, biyo mareenno iyo waddooyin cusub.
“Codkaaga maantu waa aayahaaga berrito”.
Yassin Omar Yare 317
Xarun cusub oo aan weli Somaliland hore loogu arag oo laga furay caasimadda Hargaysa..
Dowladaha Ethiopia iyo Djibouti oo ka markhaati Kacay Horumarka iyo Guulaha ay Somaliland gaadhay
Wadada 150 -Ka ee Magaalada Hargeysa ayaa laga guray Gadiidkii dhex yaalay
Reer Awdal Xisbiyada Mucaaradku Wey U Hiliyeen”Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Ee Gobolka Saxil “
Ingiriiska oo laga xusay Soomaali hormuud u ahaa soo afjarida midab takoorkii Koonfur Afrika.
Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliland Oo Sheegtay In Tababar Loo Furi Doono Golayaasha Deegaanka Dalka
Madaxweyne ku xigeenka oo Kormeeray Xarun Cusub oo loogu Talogalay Xaaladaha Degdega ah